Art is My Life: January 2008
ဒီနေ့ ၃၁ ရက် .................
သာမာန်အားဖြင့် ကြည့်ရင်တော့ ၃၁ ရက်သည် လကုန်ရက် တစ်ရက်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် ထိုရက်သည် လခထုတ်သည့်ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် လကုန်မည့်နေ့ကို လပေါင်းများစွာ မျှော်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုစဉ်က လသည်ကုန်ခဲလှသည်။
ဒီနေ့သည် ၃၁ ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ဒီလရဲ့ ၃၁ ရက်ကို မမျှော်ခဲ့မိပါ။ သို့ရာတွင် လသည် အကုန်မြန်သည်ဟု ထင်မိသည်။ အကုန်မြန်သည်ဟု ထင်ရသော ယနေ့တွင် ကျွန်တော့်ကို လစာပေးမည့်သူ မရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် လခထုတ်ရက်သည် ကျွန်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း အလျှင်းမရှိတော့ပါ။
လခထုတ်ရက်ဟာ ပြတ်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်း တစ်ယောက်လို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရချိန်မှာ၊ လွမ်းသလိုလို ရှိလာသည်။
သို့သော် ကျောင်းလခ ပေးရမည်။ ရစရာမရှိတာ ပြသနာမရှိပေမယ့် ပေးစရာရှိနေသည်။ သို့သော်လည်း မတတ်နိုင်၊ လသည်ကုန်ခဲ့ပြီ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:10 PM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူ့တူလေး အကြောင်း ပြောပြသည်။ သူ့တူလေးသည် ငါးနှစ်အရွယ်ခန့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး လန်ဒန်တွင်မွေးသည်ဟု ဆိုသည်။ မိဘများသည် မြန်မာနိုင်ငံသား များဖြစ်သော်လည်း လန်ဒန်တွင် နေရသောကြောင့် မြန်မာစကား တတ်ခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။
“ငါတို့ အစ်ကို အလည်ပြန်လာတော့ ငါတို့တူလေးလည်း ပါလာတယ်။ သူ့ကို မြန်မာစကား ပြောတတ်အောင် ဆိုပြီး ငါတို့ ၀ိုင်းသင်ကြတာ။ သူနေသွားတဲ့ နှစ်ပတ်လောက် အတွင်းမှာ တခြား စကားတွေ တတ် မတတ်တော့ မသိဘူး။ စကား နှစ်ခွန်းကိုတော့ ကောင်းကောင်း ပြောတတ်သွားတယ်”
သူ့တူလေး ပြော တတ်သွားသည့် စကားနှစ်ခွန်းက ဘာလဲဟု မေးကြည့်လိုက်တော့။
“ဟေး …. မီးလာပြီ”
ကျွန်တော် အလုပ်အတွင်း၌ ရှိနေစဉ်က ဖြစ်သည် . . . . .
ကျွန်တော်တို့ ရုံးမှာ အိပ်ကြသော သူများသည် ညပိုင်းတွင် တော်ရုံ တန်ရုံနှင့် မအိပ်ဖြစ်ကြ။ အနည်းဆုံးတော့ ညတစ်နာရီကျော် နှစ်နာရီလောက်မှသာ အိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နံနက် စောစောစီးစီး ဖုန်းလာပါက ထကိုင်ရမှာ ပျင်းကြသည်။
ထိုနေ့က ကျွန်တော် မိုးလင်းခါနီးမှာ အိပ်သည်။ အိပ်ပြီး သိပ်မကြာသေး တယ်လီဖုန်းက မြည်လာသည်။ ကျွန်တော် ခေါင်းတစ်ချက် ထောင်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျန်အိပ်နေသူများ တုတ်တုတ်မျှ မလုပ်ကြ။ ထို့ကြောင့် မြည်နေသော တယ်လီဖုန်းကို ကိုင်ရန် အတွက် ကျွန်တော် လေးဖင့်စွာ ထလာခဲ့သည်။ ဖုန်းကို ကောက်ကိုင် လိုက်တော့ ဖုန်းက ကျသွားပြီ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ပြန်အိပ်ဖို့ အိပ်ရာဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
အိပ်ရာပေါ်တွင် လှဲလိုက်ခါရှိသေးသည် ဖုန်းက မြည်လာပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ဖုန်းကို ထပြီး ကိုင်ရပြန်သည်။ ကိုင်လိုက်တော့ စောစောက ကဲ့သို့ပင် ဖုန်းကျသွားပြန်သည်။ ကျွန်တော် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ဖုန်းကို ပြန်ချလိုက်တော့ ဖုန်းက ပြန်မြည်လာပြန်သည်။
နံနက်စောစော စီးစီး အိပ်ကလည်း အိပ်ချင် ဖုန်းကလဲ ကိုင်ရင်ကျ သွားလိုက် ပြန်ခေါ်လိုက် လုပ်နေသော ကြောင့် ကျွန်တော် စိတ်တိုသွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဖုန်းကို ချက်ခြင်း ကောက်ကိုင်ပြီး ဘာကိစ္စလဲဟု မေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုအချိန်တွင် စိတ်အနည်းငယ် တိုနေသောကြောင့် ကျွန်တော့် အသံမှာလည်း နဲနဲ မာဆတ်ဆတ် ဖြစ်သွားဟန် တူသည်။ ထိုကြောင့် တစ်ဖက်က ဖုန်းပြောသူ အသံက မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်သွားသည်။
“ဂျာနယ်တိုက်က ပါလားကွယ် . . . . ”
တစ်ဖက်မှ အသံသည် အသက်ခြောက် ဆယ်ကျော် အရွယ်ခန့်ရှိသော အမျိုးတစ်မီး တစ်ဦး ဖြစ်ဟန် တူသည်။ ကျွန်တော်က ဂျာနယ်တိုက် ဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် ဖုန်းဆက်ရင်း ကိစ္စကို မေးကြည့်တော့။ သူက တောင်ဒဂုံကပါတဲ့ သူတို့ တောင်ဒဂုံမှာ မီးပျက်နေလို့ဟု ဆိုသည်။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ ရယ်ချင် သလိုဖြစ်သွားသည်။ မီးပျက်တာ လျှပ်စစ် ဌာနကို မဆက်ပဲ ဂျာနယ်တိုက်ကို ဆက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မည်နည်း။
“အဖွားကလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ရုံးလည်း ပျက်တာပဲလေ”
ဟု ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တော့
“အေးကွယ် မနက်စောစော စီးစီး ဒီအဖွားကြီး အလုပ် လိုက်ရှုတ်ပြီး ဟိုဖုန်းဆက် ဒီဖုန်းဆက် လျှောက်ဆက်နေတယ်လို့ ထင်မှာပဲလေ . .. ”
ဆိုပြီး သူ့စကားကို ခဏဖြတ်သွားသည်။ ကြည့်ရတာ သူ့စိတ်ထဲမှာ ထပ်ပြောချင်ပုံ ရသည်။
“သြော် . .. ရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး”
ဟုပြောလိုက်တော့ သူစကားတွေ ဆက်ပြောသည်။
“အဖွားတို့ မီးမလာလို့ ရေမချိုးရတာ နှစ်ရက်ရှိပြီ။ အိမ်မှာက ရေစက်နဲ့ အ၀ီစိ တွင်းကနေ ရေတင်ရတာလေ။ မီးမလာတော့ ရေမတင်ရဘူး။ မီးကလည်း လာရင် ညဘက် ညဉ့်နက် သန်းခေါင်မှ လာတယ်။ မိုးလင်းရင် ပျက်သွားတယ်။”
“အဖွားကလည်း အဲလို မီးလာတဲ့အချိန်မှာ တင်လေ”
“အေးကွယ် အဖွားတို့က အိမ်မှာ ယေကျာင်္းလေးလဲ မရှိဘူး။ အသက်ကြီးကြီး မိန်းမတွေ ချဉ်းပဲဆိုတော့ ညဘက်ကို မထနိုင်ဘူးလေ။ အခုလဲ မီးမလာဘူး။ ရေမရှိတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိလို့ ဂျာနယ်တိုက်ကို ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တာ။”
ကျွန်တော်က ဒါများ ဖွားရယ် လျှပ်စစ်ရုံးကို ဖုန်းဆက် မေးကြည့်ပါလားလို့ ပြောတော့၊ လျှပ်ရုံး ဖုန်းနံပါတ်ကို မသိကြောင်း။ မီးပျက်နေတော့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိလို့ ဖတ်နေကျ ဂျာနယ်ထဲက ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောသည်။
“မီးကလဲပျက်။ ရေကလဲ ချိုးစရာမရှိဆိုတော့။ အဖွားတို့မှာ ဘယ်ကို ဘာပြောလို့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ဂျာထဲက နံပါတ်အတိုင်း ဆက်ကြည့်လိုက်တာပါ။ ဂျာနယ်တိုက်က ဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရမှန်းတော့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို ပြောစရာ ရှိတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်ရတော့လည်း စိတ်ထဲမှာ ပေါ့သွားတာပေါ့ကွယ်” ဟု ပြောပြီး ထိုအမျိုး သမီးကြီး ဖုန်းချသွားသည်။
အဒေါ်က ရိပ်သာ ၀င်မည် ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်တွင် အစ်မတစ်ဦးတည်း ကျန်ခဲ့မည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို အိမ်ကို လာအိပ်ပေးဖို့ အစ်မတစ်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်သူက ခေါ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အဒေါ်အိမ်တွင် အိပ်ရှိရာ ဒဂုံ အရှေ့သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ထွက်သာ လာခဲ့ရသည် အဒေါ်အိပ်ရှိရာ ရပ်ကွက် မီးမှ လာပါ့မလား မသိ။
ကျွန်တော် ဒဂုံ အရှေ့ကို ရောက်တော့ မိုးချုပ်နေပြီ။ အဒေါ်အိမ်ရှိရာ ရပ်ကွက်ထဲကို ၀င်လိုက်တော့ မီးလေးတွေ လင်းနေသည်။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ အချိန် ရောက်မှာ သက်ပြင်း ချနိုင်တော့သည်။
အိမ်ရောက်တော့ ရေချိုး ထမင်းစားပြီး ကွန်ပျူတာသုံးမယ် လည်းလုပ်ရော။ အမက ဖွင့်လို့ မရသေးဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့မေးတော့ မီးအားကျနေတယ်ဟု ဆိုသည်။ ကျွန်တော် မီးအား အတက်ကျ ပြသည့် မီတာလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မီးအားက ၁၄၀ နှင့် ၁၅၀ ကြားမှာပဲ ရှိသည်။ ထိုကဲ့ သို့မီး အားကျနေခြင်းမှာ ကျွန်တော့် အထင်တော့ မီးလာသည့် အချိန်လေးတွင် မီးအားမြှင့်စက် ရှိသူများက မီးအားမြှင့်စက်များ ဖြင့် ၀ိုင်းဆွဲကြသော ကြောင့် မီးအား မြှင့်စက် မရှိသော အိမ်များ တွင်မီးအား ကျသွားကြ ဟန်တူသည်။
ထို့ကြောင့် မီးလာပြန်သော်လည်း မီးအားတက်လာရန် စောင့်ရပြန်သေးသည်။ ညဆယ်နာရီ လောက်ရောက်တော့ မီးအား ပြန်တက်လာသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ မီးအားက ၂၀၀ နှင့် ၂၁၀ ကြားမှာ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပြီး ဓာတ်ပုံ ပြင်စရာရှိသည် များကို ပြင်နေသည်။ ညဆယ့်တစ်နာရီ လည်းထိုးရော မီးက ပျက်သွားပြန်သည်။ ထိုအချိန် ကတည်းက ပျက်သွားသော မီးသည် မနက် ကျွန်တော် အိမ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ အထိပြန်လာခြင်း မရှိတော့ပေ။ မီးပျက်သွားသည့် အတွက် အလုပ်က မပြီးလိုက်။
ကျွန်တော် အဒေါ်အိမ်ကပြန်လာတော့ ဘတ်စကားက ထုတ်ပေးစဉ် ပိုက်ဆံကြားမှ စာရွက်တစ်ရွက် ညှပ်ပါလာသည်။ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တော့ မီတာ စာရွက်။ အဲတော့မှ သတိရသည် ကျွန်တော် မီတာ ဆောင်ရခြင်း မရှိသေး။
ကျွန်တော်သင် တန်းဆင်းသည်နှင့် မီတာရုံးသို့ တန်းလာခဲ့ရသည်။ မီတာဆောင်ရက်မှာ ရက်လွန်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ခါတိုင်းလို အောက်ထပ်တွင် မပြီးပေ။ မီတာရုံး အပေါ်ထပ်သို့ တက်ကာ ဒါဏ်ကြေး တစ်ထောင်သွင်းရသည်။
စာရေးမက ဒါဏ်ကြေးကို ဘောင်ချာ စာရွက်မှာ ရေးနေတုန်း ရုံးနံရံတွင် ကပ်ထားသော ဘုတ်များကို စပ်စပ်စုစု လိုက်ဖတ်ကြည့်သည်။ ထိုဘုတ်များထဲမှာ တစ်ခုမှာ လျှပ်စစ် ပေးဝေရေး အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်များကို ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရည်မှန်းချက်များ ထဲမှ အောက်ဆုံး အကြောင်းမှာ
လျှပ်စစ်မီးဖြင့် လူ့လောက နိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးကို ဖော်ဆောင်အံ့
ဟုရေးထားသည်။ စာသား အနည်းငယ် လွဲကောင်း လွဲပါမည် ဆိုလိုရင်းကတော့ လျှပ်စစ်မီးဖြင့် လူ့လောက နိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးသဖွယ် ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ဖို့ ရည်းမှန်းထားသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ လမ်းထဲကို ၀င်လိုက်သည့် နှင့် မီးစက်သံကြီးများက ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဒိုင်း ဖုန်းဒိုင်းနှင့် ဆီးကြိုနေကြသည်။ သောချာပြီ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထဲမှာ မီးပျက်နေပြီ။ ကျွန်တော် စိတ်ပျက်လက် ပျက်နှင့်ပင် အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့သည်။ မီးပျက်တော့ ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာ မရှိသည့် အတူတူ အိပ်တာပဲ ကောင်းသည်ဟု ကျွန်တော် တွေးလိုက်မိသည်။
မနေ့ညက မပြီးဆုံးသေးသော အိမ်စာများကို လုပ်မည်ဆိုသည့် စိတ်ကူးများကို ဖုန်းဒိုင်း ဖုန်းဒိုင်း နှင့် မြည်နေသော မီးစက်သံကြီးများက လွမ်းမိုးသွားသည်။ လျှပ်စစ်မီးဖြင့် လူ့လောက နိဗ္ဗာန်ဘုံကြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အချိန်ကို စိတ်ကူးကြည့်ရင်း ထိုနေ့ နေ့လည်ခင်းက မီးပျက်နေသော အခန်းကျဉ်းလေး တစ်ခုတွင် ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:38 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ချိန်ကိုက်ဗုံးခြောက်လုံးနှင့် အချုပ်ခန်းထဲက နံနက်စာ
၂၀၀၆ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းကာလက ဖြစ်သည် . . . .
ခပ်ဝေးဝေးမှ ပေါက်ကွဲသံလိုလို အသံကြောင့် ကျွန်တော် အိမ်နေရာမှ လန့်နိုးလာသည်။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ညနှစ်နာရီ ကျော်နေပြီ။
ထုံးစံ အတိုင်းဆို ကျွန်တော့်မှာ အစောကြီး အိပ်တတ်သည့် အကျင့်မရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညနှစ်နာရီ ကျော်မှသာ အိပ်ဖြစ်သည်။ ရုံးပိတ်သော စနေလို ညမျိုးဆိုလျှင် နေထွက်လောက်မှ အိပ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ညပိုင်း အအိပ်နည်းသော ကျွန်တော်သည် ထိုနေ့က ဧည့်ခန်းရှိ ဆိုဖာပေါ်တွင် ခဏလဲ ခိုက် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် အိပ်ရာမှ လူလဲထက ၀ရံတာကို ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ကျီးကန်း အော်သံ ဆူဆူ ကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် မအိပ်သေးသော သူငယ်ချင်းများကို ဘာဖြစ်တာလဲဟု ကျွန်တော် လိုက်မေးကြည့် သေးသည်။ သူတို့က မသိကြ။ ပေါက်ကွဲသံလိုလို အသံတစ်သံ မကြားမိဘူးလားဟု ကျွန်တော်က မေးတော့လည်း သူတို့က မကြားမိကြပြန်ဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ပြန်အိမ်မည်ဟု စီစဉ်နေတုန်း နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲသံ တစ်သံကို ထပ်ကြားရပြန်သည်။
သေချာပြီ တစ်နေရာရာမှာတော့ ဗုံးပေါက်ပြီ။ ယခု တစ်ဖန်ကြားရသော အသံသည် ကျွန်တော်တို့ သိပ်ဝေးပုံ မပေါ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ကင်မရာကို ယူကာ အောက်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။
မဟာဗန္ဒုလ လမ်းပေါ်ရောက်တော့ လမ်းထိပ် ဆိုက္ကားဂိတ်က လူတစ်ချို့က ပုစွန်တောင် ဘက်ကို လှမ်းကြည့် နေကြသည်။ ကျွန်တော် မေးကြည့်တော့ ဗုံးပေါက်တာ ထင်တယ်ဆိုရုံကလွဲ ပြီး သေသေချာချာ မသိကြ။ ကုန်သည် လမ်းဘက်ကို ကျွန်တော် လှမ်းမျှော် ကြည့်ပြန်တော့ အဲဒီ ဘက်က လူစုကလည်း ပုစွန်တောင်ဘက်ကို လှမ်းမျှော် ကြည့်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ကုန်သည်လမ်းဘက် ဆီသို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။
ကုန်သည်လမ်း ရောက်တော့ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းဆီမှ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကို လာနေသည်။ သူ့လက်ထဲတွင်လည်း ကျီးကန်း အသေတစ်ကောင်ကို ကိုင်ထားသည်။ ဗုံးဘယ်နားမှာ ကွဲတာလဲလို့ အဲလူကို မေးတော့ ဗိုလ်အောင်ကျော်နဲ့ ကုန်သည် လမ်းဒေါင့်မှာတဲ့။
ကျွန်တော် ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ဒေါင့်ကို ရောက်တော့ လူတစ်ယောက် ဓာတ်မီးတစ်လက်နဲ့ ရပ်နေသည်။ သူက ဗုံးကွဲသည့် နေရာကိုလည်း ကြည့်ချင် သေးသည် ကြည့်ကလည်း မကြည့်ရဲ ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်က သူ့ဆီက ဓာတ်မီးငှားပြီး သွားကြည့်တော့ ထို လမ်းဒေါင့်ရှိ လျှပ်စစ် ဗရိတ်ကာ ပုံးကြီးကို ဗုံးကွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဗုံးရမ်းအား ပျော့ရွေ့လား မသိ သိပ်ကြီးကြီးမှား အပျက်အစီး မရှိပေ။ သို့ပေမယ့် ထိုဘရိတ်ကာ ပုံအပေါ်ရှိ အပင်ပေါ်မှ ကျီးကန်းများ ကတော့ ဆူဆူညံညံ ဖြစ်နေကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံသုံးပုံ ရိုက်ကာ ရုံးသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော် ပြန်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့သော ဗုံးကွဲသည့် ပုံများကို ပြန်ကြည့်ကြသည်။ ကင်မရာ LCD တွင်ကြည့်တာ အားမရကြတာ ကြောင့် ကွန်ပျူတာအတွင်း ထည့်ကာ ကြည့်ရန် ပြင်ကြသည်။ ထိုသို့ ပုံများ ကွန်ပျူတာ အတွင်းသို့ ထည့်ရန် ပြန်နေတုန်း နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲသံ နှစ်ချက်ကို ထပ်ကြားရသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ကင်မရာကို ပြန်ယူကာ အောက်သို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ဆင်းသာ ဆင်းလာရသည် ပထမအသံ ကြားတုန်းကကဲ့သို့ပင် မည်သည့်နေရာတွင် ကွဲသည်ကိုကား ခန့်မှန်း၍ မရ။ ထုံးအစံအတိုင်း အထက်အောက် ကြည့်လိုက်တော့ လူတွေက ကုန်သည် လမ်းထပ်မှာပဲ စုနေပြီး ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ဘက်ကိုပဲ ကြည့်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ပထမဗုံးကွဲသည့် နေရာသို့ပင် ဆက်လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော် စောစောက ဓာတ်ပုံရိုက်သွားသည့် နေရာရောက်တော့ ရဲတွေနှင့် တခြား ဓာတ်ပုံ သမားတွေ ရောက်နေကြပြီ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အခြား ဓာတ်ပုံ သမားများနှင့် အတူ ပထမ ကျွန်တော် ရိုက်ခဲ့ပြီးသား နေရာကို ပင်ထပ်ကာ ရိုက်လိုက်သေးသည်။
ယခု ဗုံးကွဲခြင်းသည် စုစု ပေါင်းငါးလုံး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပြီး တစ်လုံးကိုတော့ လမ်းမတော် ဘက်တွင် မကွဲမှီ တွေ့ရှိလိုက်ကာ ဗိုလ်အောင် ကျော်လမ်းထဲတွင်ပင် နှစ်နေရာ ကွဲသည်ဟု ရဲများ၏ ပြောစကား အရသိရသည်။ သို့ပေမယ့် ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းထဲက နောက်တစ်နေရာ ဘယ်နားမှာကွဲမှန်း ရှ၍မရသေး။ ထိုအချိန်တွင် စာတိုက်ကြီးဘက်မှ လူတစ်ဦး ရောက်လာပြီး ဗုံးကွဲသည့် နောက်တစ်နေရာကို လိုက်ပြသည်။ ဗုံးကွဲသည့် နေရာမှာ Silver Oak အနီးရှိ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးအရှေ့တွင် ဖြစ်သည်။ ပထမ နေရာနှင့် ဒုတိယနေရာ လွန်လွန်းကျွန်လွန်း ပေနှစ်ရာခန့်သာ ကွာမည် ထင်သည်။
ထိုနေရာတွင် ကျွန်တော်တို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေခိုက် တိုင်းမှုးနှင့် ရဲချုပ်ရုံးမှ ရဲအရာ ရှိများ ရောက်လာကြသည်။ သူတို့ ပြောနေသော စကားသံများအရ အခြားလေးနေရမှာ လမ်းလေးဆယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ်၊ ဆူးလေ အနော်ရထာထိပ် ရထားသံလမ်း နဲ့ လမ်းမတော် မြို့နယ်အတွင်း တို့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် သိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်နေရာများကိုလည်း သွားရိုက်ရန် ကျွန်တော် လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။
လမ်းလေးဆယ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ် ရောက်တော့ ထရန်စဖော်မာကို ဗုံးခွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဗုံးအားသေးသောကြောင့် ထရန်စေဖော်မာကို ထိခိုက်မှု မရှိသော်လည်း ကာရံထားသည့် အုတ်ထရံများ ကျိုးပဲ့နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနေရာတွင် ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ သုံးပုံခန့် ထပ်ရိုက်လိုက်သည်။ ထိုသို့ ရိုက်နေတုန်း AFP မှ ဓာတ်ပုံဆရာ ရောက်လာသည်။ နောက်ထပ်ကွဲ သည့်နေရာ ရွှေမြင်းပျံ စတိုးအရှေ့ (ဂျပန် သတင်းထောက် သေသွားသည့် နေရာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်) မှာကွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး သူကတော့ ရိုက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင် ရိုက်ရန် ဆက်လက်ထွက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်လည်း ဒီတိုင်းသွားရမှာ ခြေညှောင်းသောကြောင့် ဆိုက္ကားငှားပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ ရွှေမြင်းပျံ စတိုးအရှေ့ကို ရောက်တော့ အစောင့်ချထားသော ရဲနှစ်ယောက်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်က ထိုရဲ နှစ်ယောက် ကို ဗုံးကွဲသည့် နေရာအား မေးကာ ဓာတ်ပုံ နှစ်ချက်ရိုက်လိုက်သည်။
ထိုအခါ ရဲနှစ်ယောက်က ဘာဖြစ်လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်တာလဲဟု မေးသည်။ ကျွန်တော် ဂျာနယ်တိုက်က ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ သူတို့က ဂျာနယ်တိုက် အမည် မေးသည်။ ကျွန်တော်က ဂျာနယ်တိုက် အမည်ပြောကာ ပြန်မည် လုပ်နေတုန်း ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာဖြစ်တာလဲဟု ဆိုက ဝေါ်ကီ တော်ကီ ကိုင်ထားသော သုံးပွင့်နှင့် စစ်ဗိုလ် တစ်ဦး ရောက်လာသည်။
ရဲများက ဓာတ်ပုံ ရိုက်သွားကြောင်း ပြောတော့ ထိုသုံးပွင့်နှင့် စစ်ဗိုလ်က ပုံများကို ဖျက်ပစ်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောသည်။ စောစောက တိုင်းမှုး အရှေ့တွင် ရိုက်တာတောင် ဘာမှ မပြောသည့်ဟာကို သူကလာပြီး ဖျက်ဖို့ ပြောနေတော့ ကျွန်တော်လဲ မဖျက်နိုင်ဘူးဟု ပြောလိုက်သည်။ ဖျက်ပြီးသား ပုံများကို Recovery ဆော့ဝဲနှင့် ပြန်ခေါ်လျှင် ရသည်ကိုလည်း ထိုစဉ်က မသိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ခဲရာခဲဆစ် ရိုက်ထားသည့် ပုံများကို ကျွန်တော် ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ဖျက်မပေးနိုင်ပါ။
ထိုအခါ သုံးပွင့်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်က မဖျက်ပေးနိုင်လျှင် ကင်မရာ ထားခဲ့ရမည်ဟု ပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ကင်မရာပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်က ထိုပုဂ္ဂိုလ် နာမည်နှင့် တာဝန် ဌာနတို့ကို ပြန်မေးသည်။ ကျွန်တော် မေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြားတော့ မဟုတ် နောက်တစ်နေ့ ကင်မရာ ပြန်ရွေးရန်အတွက် ကိုယ့်ကင်မရာကို မည်သူက သိမ်းသွားသည်ကို သိရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်လည်း ကင်မရာကို စစ်ဗိုလ်လက်ထဲသို့ ထည့်ကာ ပြန်ထွက်ရန် အတွက် ဆိုက္ကားပေါ်သို့ တက်ခဲ့သည်။ ဆိုက္ကား ထွက်မည်ပြုစဉ် ခဏလာဦးဟု ဆိုကာ စောစောက စစ်ဗိုလ်က ပြန်ခေါ်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဆိုက္ကားပေါ်က ဆင်းသွားတော့ သူနဲ့ခဏ လိုက်သွားလိုက် ဆိုကာ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးနှင့် ကျွန်တော့်ကို ထည့်ပေးလိုက်သည်။
ရဲတပ်ကြပ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို ကျောက်တံတား ရဲစခန်းသို့ ခေါ်သွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း ရဲစခန်းရောက်မှ ရုံးကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ရင် ရုံးက လိုက်ရှင်းလိမ့်မည် ဟုတွေးကာ အေးအေး ဆေးဆေးပင် လိုက်ခဲ့သည်။ ရဲစခန်းရောက်တော့ နာမည် အသက် နေရပ် အလုပ်အကိုင်တို့ကို မေးကာ စာအုပ်ကြီးထဲတွင် ရေးထည့်နေသည်။ ထိုသို့ ကျွန်တော့်ကို ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်ခိုင်းထားသည်။ ကျွန်တော်က ရုံးကို ဖုံးခေါ်ပေးရန် ပြောသောအခါ ခေါ်ပေးခြင်းမရှိ။ စစ်ဒေသမှ အပ်ထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ခေါ်ဆိုခွင့် ပေးနိုင်းခြင်း မရှိဟုဆိုသည်။
ခဏလောက် ကြာတော့ လူကြီးတွေ လာမည်ဖြစ်ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ခုံတန်းမှာ မထိုင်ပဲ အတွင်းခန်းတွင် ထိုင်ရန် ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အတွင်းခန်းသို့ ၀င်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော် အတွင်းခန်းထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် အပြင်က တံခါးကို သော့ခတ် လိုက်ကြသည်။ ကျွန်တော်လဲ ခတ်ပစေ ဆိုပြီး အသာ ကြည့်နေ လိုက်သည်။ အတွင်းခန်းဆိုသည်မှာ တာဝန်မှုးအခန်းနှင့် အချုပ်ခန်းကြားရှိ အခန်းလေး တစ်ခန်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နှင့် အချုပ်ခန်းနေရာသည် ဆယ်ပေခန့်သာ ဝေးတော့မည် ထင်သည်။ ထို့ကြောင့် အချုပ်ခန်းအတွင်းမှ အချုပ်သားများကို လှမ်းမြင်နေရသည်။
ထိုကဲ့သို့ အချုပ်သားများထဲတွင် ကျွန်တော်နှင့် သိသော အရာရှိကြီး တစ်ယောက်လည်း ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ထိုအရာရှိကြီးသည် လုပ်ငန်းအတွင်း ငွေကြေးကွာဟ သဖြင့် ကျောက်တံတား ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းခံထားရသည်ကို ကျွန်တော် ယခင်ကတည်းပင် ကြားပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုအရာရှိကြီး ဘေးတွင် တရုပ်တစ်ယောက်က စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေသည်။
အချုပ်ခန်း၏ အပြင်ဘက်၌ ဆယ်နှစ် ၀န်းကျင်ခန့်ရှိ ကောင်လေး နှစ်ယောက်ကို တွေ့ရသည်။ ကောင်လေး နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရသည်မှာ တစ်ခုခုကို အလစ်သုတ်၍ ချုပ်ထားဟန် တူသည်။ ခဏလောက် ကြာတော့ ထိုကောင်လေး နှစ်ယောက်သည် အချုပ်သားများ ပေးသော ဆေးပေါ့လိပ်ကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ဟန်ပါပါ သောက်နေကြသည်။
ကျွန်တော် စိတ်ထဲတွင် ထင်ထားသည်က ကျွန်တော့်ကို အတွင်းခန်းထဲတွင် ခဏထည့်ထားခြင်း သာဖြစ်သည်ဟု ထင်ထားသည်။ သူတို့လူကြီး ဆိုသူတွေ လာပြီးသွားပါက ကျွန်တော့်ကို အပြင်သို့ ပြန်ထုတ် ပေးလိမ့်မည်ဟု ထင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ လူကြီးဆိုသူများ အလာကို ကျွန်တော် စောင့်ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော် စောင့်ရင်း စောင့်ရင်းဖြင့် တစ်နာရီခန့်သာ ကြာသွားသည် သူတို့ လူကြီးဆိုသူလဲ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အပြင်သို့ ထုတ်မပေးပဲ ထားသည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော်ကို အပြင်ထုတ် ပေးဖို့ လှမ်းမြင်နေရသော ရဲတပ်ကြပ်ကြီးကို ပြောသည်။ ထုတ်ပေးလို့ မရဘူး မင်းကို စစ်ဒေသက အပ်ထားတာ။ ခဏနေရင် အချုပ်ခန်းထဲကို ထည့်မယ် ဟု ရဲတပ်ကြပ်ကြီးက ပြန်ပြောသည်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်သည်။ သေချာသည်ကတော့ ဒီည ကျွန်တော့်ကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့ အစီစဉ်မရှိ။
ကိုယ့်ကို ချုပ်နှောင်လိုက်ပြီဟု သိရသည့်အခါတွင် စိတ်ထဲတွင် ကျဉ်းကျပ်လာသလို ခံစားလာရသည်။ ကျွန်တော် အချုပ်ခန်းအတွင်းက သံတိုင်ကြီးများကို ကြည့်ကာ စဉ်းစားနေမိသည်။ ကျွန်တော် တကယ်ပဲ အပြစ်ကျူးလွန် မိခဲ့သလား။ ကျွန်တော်ပဲ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို လက်လှမ်းမှ၍လား မသိ သာမန်နေရာ တစ်ခုမှာ ဗုံးကွဲတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်မှ မကြားဖူးပါ။ မကြားဖူးပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ အချုပ်ခန်း ၀ ကိုတော့ ကျွန်တော် ရောက်နေပြီ။
ကျွန်တော် အပြင်ကို ထွက်လို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားကြည့်မိသည်။ ကျွန်တော်စဉ်းစား မိသော နည်းလမ်းများထဲက တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်သာကို မတွေ့ရ။ ထို့ကြောင့် ပေါ့စွန့်ခြင်းကို အကြောင်းပြလျှင်တော့ အိမ်သာတက်ဖို့ တခါးဖွင့်ပေး ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော် အပြင်သို့ ထွက်ရမည်။ အပြင်သို့ ထွက်ရသည့် အချိန်သည် ငါးမိနစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆယ်မိနစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သော့ခတ်ထားသော အခန်းထဲတွင် ဒီတိုင်း ငုတ်တုပ်ကြီး ထိုင်နေရ တာထက်တော့ မွန်းကျပ်မှု သက်သာပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် အပေါ့စွန့် ချင်သည်ဟု လှမ်းအော်ပြောလိုက်သည်။
ထိုသို့လဲ ပြောလိုက်ရော ရဲတစ်ယောက် တံခါးဖွင့်ပြီး ၀င်လာသည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ အပြင်သို့ ထုတ်ပေးမည်ဟု ထင်ထားသော်လည်း သူက အမျိုးသမီး အချုပ်ခန်းအတွင်းသို့ ခေါ်သွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် အမျိုးသမီး အချုပ်သားများ မရှိသောကြောင့် အချုပ်ခန်းက လွတ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ကို ထိုအခန်းအတွင်းတွင် စွန့်ရန် ပြောသည်။ ထိုအခန်းသွင်းသို့ ခွေးတိုးပေါက်လို တံခါးလေးမှ ကုန်းပြီး ၀င်ရသည်။ အထဲရောက်ပြီး ကျွန်တော် အပေါ့စွန့်သည်။ ပြီးတော့ ပြန်ထွက်မလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အပြင်က သော့ခတ်သွားသည်။ ပြန်ထွက်၍ကား မရတော့ပြီ။ ကျွန်တော် မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်လွဲသွားသည်။ အပြင်ထွက်ရမလားလို့ အပေါ့စွန့်ချင်သည် ဆိုလိုက်ခါမှ ပိုဆိုးသော အချုပ်ခန်း အတွင်းသို့ ရောက်သွားသည်။
ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ ကျွန်တော် တင်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ကို အပြင်ထုတ်ပေးဖို့ လှမ်းအော် ပြောလိုက်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော့်ကို အမျိုးသမီး အချုပ်ခန်း အတွင်းမှ ထုတ်က စောစောက နေရာတွင် ပြန်ထားလိုက်သည်။ ညနေက အိပ်ထားသည့် အရှိန်ကြောင့်ပဲလား သို့တည်းမဟုတ် အချုပ်ထဲမှာ မို့လားမသိ ကျွန်တော် အိပ်၍မရပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် တစ်ချိန်လုံး ငုတ်တုပ် ထိုင်နေလိုက်သည်။
မနက်မိုးလင်း၍ အလင်းရောင်ကို မြင်ရပြီ။ အခု အချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ ရုံးက လိုက်မလာ ကြသေး။ နံနက် ခြောက်နာရီခန့် ရောက်သော အခါတွင် တရုပ်မလေး တစ်ယောက် ဂျိင့်လေးဆွဲကာ ရောက်လာသည်။ ထိုအခါ ယမနေ့ညက မြင်ရသော တရုပ်ကြီးကို အချုပ်ခန်း အတွင်းက ထုတ်ပေးပြီး ကျွန်တော့် ဘေးနားသို့ခေါ်လာသည်။ ထိုအခါ တရုပ်မလေးက ၀င်လာကာ ဂျိုင့်အတွင်းမှ မုန့်ဟင်းခါးများကို တရုပ်ကြီး အတွက် ပြင်ပေးသည်။ ကြည့်ရသည်မှာ ထိုတရုပ်မလေးသည် တရုပ်ကြီး၏ သမီး ဖြစ်ဟန်တူပြီး ကျွန်တော်နှင့် ရွယ်တူခန့်ရှိသည်။
ထိုတရုပ်ကြီး သားအဖကို မြင်တော့ ကျွန်တော် အကြံတစ်ခု ရသွားသည်။ တရုပ်ကြီးကို မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးပြီးလျှင် သူ့သမီး သေချာပေါက် ပြန်လိမ့်မည်။ ထိုအခါတွင် ကျွန်တော့ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပေးဖို့ အကူညီ တောင်းမည်ဟု စိတ်ကူးထားသည်။ ခဏကြတော့ တရုပ်ကြီး မုန့်ဟင်းခါး စားပြီးသွားပြီ။ တရုပ်မကလဲ ပြန်ဖို့ ပြင်နေပြီ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့က ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပေးဖို့ တရုပ်မထံတွင် အကူညီတောင်သည်။ ကောင်မလေးက ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်ဖို့ပြင်တုန်းပင် ရှိသေးသည် တရုပ်ကြီးက သူ့သမီးကို ဇွတ်အပြန် ခိုင်းလိုက်သည်။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ သူ့သမီးကို ကျွန်တော် စကားပြောတာကို ပင်ကြိုက်ပုံမရ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်၏ ဖုန်းဆက်ခိုင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက် ပျက်သွားသည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ည၀တ်အိပ်သည့် အင်္ကျီအစုတ် ပုဆိုးအစုတ် ဆံပင် ဘုတ်သိုက် နှင့် ဘာအမှုနဲ့ ရောက်လာမှန်း မသိတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အကူညီ မပေးစေလိုသည်က တော့ သဘာဝကျပါသည်။
ခဏလောက်ကြာတော့ ချုပ်ခံထားရသည့် အရာရှိကြီး၏ ဇနီးနှင့် သားရောက်လာသည်။ ထိုအခါ ပထမ တရုပ်ကြီး တုန်းက ကဲ့သို့ပင် အချုပ်ခန်းတွင်းမှ ထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ဘေးသို့ ခေါ်လာသည်။ အရာရှိကြီးက ကျွန်တော့်ကို မြင်တော့ မေးသည်။ မင်းက ဘာဖြစ်လို့ ရောက်လာတာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်က အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့ အဲဒါဆိုရင်တော့ မပူပါနဲ့ ခဏနေ မင့်ရုံးက ရောက်လာရင် ပြန်လွတ်ပေးလိမ့်ဟု အားပေးစကား ပြောသည်။ ထိုအရာရှိနှင့် သူ့ဇနီးတို့ စကားပြောနေကြတုန်း ကျွန်တော် အိပ်ငိုက်သွားသည်။
“စစ်ဒေသက အပ်ထားတာမို့ ကျွန်တော်တို့ လွပ်ပေးလို့မရဘူး”
ကျွန်တော် အသံကြားလို့ ခေါင်းထောင် ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးက အယ်ဒီတာ ရောက်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာနှင့် တာဝန်မှုးနှင့် စကားပြောနေကြသည်။ ပြီးနောက် အယ်ဒီတာက ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာသည်
“မင်း မပူပါနဲ့ကွာ အကို စစ်ဒေသကို သွားလိုက်ဦးမယ် ခဏစောင့်ဦး” ပြောကာ ပြန်ထွက်သွားသည်။
၁၅ မိနစ်လောက် နေတော့ ကျွန်တော့် အယ်ဒီတာ ပြန်ရောက်လာသည်။ ထို့နောက် စစ်ဒေသမှုးက မရောက်သေးလို့ စောင့်ရဦးဖြစ်ကြောင့် ကျွန်တော့အတွက် နံနက်စာ ၀ယ်ကျွေးလို့ ရမလားဟု တာဝန်မှုးကို မေးသည်။ တာဝန်းမှုးက ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟု ပြောသည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာက ကျောက်တံတား ရဲစခန်း အပြင်ဘက်ရှိ ဆိုင်မှ ထမင်းကြော်နှင့် ရေသန့်ဘူးတစ်ဘူး ၀ယ်ပြီးလာပေးသည်။ သူ စစ်ဒေသတွင် သွားစောင့်နေ ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အားမငယ် ဖို့ ပြောပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။
ကျွန်တော် ညကတည်း အိပ်ရာ ထနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဗိုက်ထဲမှာ ဆာသလိုလိုတော့ ရှိသည်။ သို့ပေမယ့် စားချင်စိတ် မရှိ။ ထိုအခါ ကျွန်တော့် ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသော အချုပ်ကျနေသည့် အရာရှိကြီးက စားထားဖို့ ပြောသည်။ ကျွန်တော် အဲဒီမှာ သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ကံမကောင်းလို့ ဒီနေ့ မနက် ပြန်မလွတ်ရင် ငတ်သွားလိမ့်မယ် စားစရာရှိတာတုန်း စားထားလိုက်ဟု တိုက်ရိုက် မပြောသော်လည်း ထိုအဓိပ္ပယ်ကို ဆိုလိုမှန်းတော့ ကျွန်တော် သဘောပေါက်သည်။ ထိုကြောင့် ထိုထမင်းကြော်ကို မစားချင်ပဲ တို့ဂဏန်း ဆိတ်ဂဏန်းဖြင့် စားနေရသည်။ တစ်ဝက်လောက် ကုန်သွားသောအခါ ကျွန်တော် လုံးဝ ဆက်စား၍ မရတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ထမင်းမစားတော့ပဲ ရေတစ်ငုံနှစ်ငုံလောက် သောက်ပြီး နေလိုက်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာ ထွက်သွားပြီး တစ်နာရီခန့် အကြာတွင် တာဝန်မှုးက ကျွန်တော့်ကို လာထုတ်သည်။ ထို့နောက် ရဲတစ်ယောက်ကို ခေါ်ကာ ကင်မရာကို ပေး၍ ကျွန်တော့်ကို မြို့တော်ခန်းမ အတွင်းရှိ စစ်ဒေသသို့ လိုက်ပို့ရန် ပြောသည်။
ကျွန်တော် စစ်ဒေသမှုး ရုံးခန်းကို ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာ ရောက်နှင့်နေပြီ။ စစ်ဒေသမှုးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို မနေ့ညက ရဲလက်အပ်လိုက်သည့် သုံးပွင့်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော် သူ့စားပွဲ အရှေ့တွင် မှတ်တပ်ရပ်နေတော့ ထိုင်ဖို့ ပြောသည်။ ထို့နောက် ဗုံးကွဲသည့် နေရာမှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်ရှိသ လားဟု ကျွန်တော့်ကို မေးသည်။
“ကျွန်တော်က ရှိပါတယ်” ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
“တွေ့တယ် မဟုတ်လား ခင်ဗျားတပည့်က၊ စကား ပြောတာ အချိုးမပြေဘူး။ မနေ့ညကလဲ ဒီပုံပဲ။ တော်ပြီး ကျွန်တော်သူ့ကို ရဲလက်ပဲ အပ်လိုက်တော့မယ်” ဟု ဆိုကာ ရဲစခန်းကို ဖုန်းခေါ်ပြီး စောစောက ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပို့တဲ့ ရဲကို ပြန်ခေါ်သည်။
“မလုပ်ပါနဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော့် ကလေးက ငယ်သေးတော့၊ စကားပြော မတတ်လို့ပါ ”
ထိုအခါတွင် ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာက ပျာပျာသလဲ တောင်းပန်သည်။ ပြီးနောက် စစ်ဒေသမှုးကို ပြန်တောင်းပန် ဖို့ ကျွန်တော်ကို ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း စစ်ဒေသမှုးကို တောင်းပန်လိုက်ရသည်။
“မင်းနားလည် အောင်ပြောထားမယ်။ မင့်ဆရာက လာတောင်းပန်လို့ မင့်ဆရာ မျက်နာနဲ့မို့ မင့်ကို ရဲစခန်းက ပြန်ခေါ်လိုက်တာ။
မင်းတို့က ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင် အလွယ်ပဲ ရိုက်လိုက်ကြတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီနေရာမှာ နောက်ထပ် တစ်လုံး ထပ်ကွဲရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ မင်းလဲ သေမယ် နိုင်ငံရေးအရလဲ သိက္ခကျတယ်။
အဲလို ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တဲ့နေရာတွမှာ ဓာတ်ပုံကို စွတ်စွတ်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးကွ။ မင်းနိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေမှာ မမြင်ဖူးဘူးလား။ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ အ၀ါရောင်စီးတွေ တားထားဖြစ် တားမြစ် ဧရိယာ လုပ်ထားတာ။ နောက်ကို ဘယ်တော့မှ မရိုက်ပါနဲ့။ ခံဝန်မှာ လက်မှတ်ထိုး”
ထို့နောက် ကျွန်တော် ခံဝန်တွင် လက်မှတ်ထိုး ကင်မရာထဲမှ ပုံများ ဖျက်ကာ ပေးပြီးနောက် ပြန်လွတ်ပေး လိုက်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုနေ့ညက အဖြစ်အပျက် ကျွန်တော့်အတွက် အများကြီး အသိတရား ရသွားပါသည်။ ဗုံကွဲသွားပြီးသည့် နေရာတွင် နောက်ထပ်ဗုံး တစ်လုံး ထပ်ကွဲနိုင်သည် ဆိုတာကို ကျွန်တော် အရင်က မစဉ်းစားခဲ့မိပါ။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့သည် သတင်းထောက်များဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခြင်းသည် သတင်းအတွက် ရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်အပျက်ကြီး တစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင်နေ ခြင်းမဟုတ်။ ယခု ကျွန်တော် အဖမ်းခံ ထိခြင်းမှာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုလုံး လိုက်ရိုက်နေ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတင်းတွင် ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြသည့် အခါတွင်လည်း အဖြစ် အပျက် တစ်ခုလုံးက ပုံတွေ ဖော်ပြနိုင်မည် မဟုတ်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သတင်းအတွက် ဖော်ပြရန် လုံလောက်သော ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ နှစ်ပုံကောင်းရသည် နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမှုကို အဆုံးသတ်ရမည်။
နောက်တစ်ရက် ညနေရောက်တော့ ကျွန်တော် ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီး မွေးနေ့ အထိမ်းမှတ် ညစာစားပွဲသို့ သွားရသည်။ ထိုညစာစားပွဲသည် အလံပြဘုရား လမ်းရှိ ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီး နေအိမ်ဝင်း အတွင်းတွင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နေ့ညက တိုက်ပုံအင်္ကျီ ပိုးပုဆိုးနှင့် စားသော ညစာနှင့် မနေ့မနက်က အင်္ကျီအစုတ် ပုဆိုးစုတ် ဆံပင်စုတ်ဆောင်းနှင့် အချုပ်ခန်းတွင်းက နံနက်စာက မည်သို့မျှ မဆိုင် ……………
သို့ရာတွင် ကျွန်တော် အသက်ကြီး၍ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သည့်အခါတွင် အခြားသော နေရာများတွင် စားသောက်ခဲ့သည့် ပုံရိပ်များကို မေ့ပျောက်ကောင်း မေ့ပျေက်ပါလိမ့်မည်။ အချုပ်ခန်း အတွင်းက နံနက်စာကိုတော့ မည်သည့်အခါတွင်မျှ မေ့ပျောက်၍ ရနိုင်မည်ကား မဟုတ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:40 PM 8 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နှင်းတွေကြားမှာ အစာထောင်နေတဲ့ ပင့်ကူ
ငယ်ငယ်ကသာ တွေ့ရင် ပိုင်ရှိမသိအောင် ခူးပြီးပြီ
ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် :P
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:45 AM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:53 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:47 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မှတ်မိသေးတယ် . . . . . .
နင်ပေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်နဲ့ မနက်များစွာကို မိုးလင်းခဲ့တယ်။ နင်တောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တစ်ညလုံး ထိုင်ရေးဖူးခဲ့တယ်။ ငါပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်က နင့်အတွက် ခေါင်းအုံး တစ်လုံး ဖြစ်ခဲ့မလား . . . .
နှင်းစက်တွေ တွဲခိုနေတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ ငါ့တို့ချစ်ခြင်းတွေကို အစပျိုးခဲ့တယ်။ ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ ပေါ်မှာ နင်နဲ့ငါ လမ်းတွေ လျှောက်ဖူးခဲ့တယ်။ နင်နဲ့ အတူထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လှေကားထစ်တွေက ငါ့ကို မေးနေကြတယ် ခင်ဗျား တစ်ယောက်တည်းလားတဲ့။ ၃၈ လမ်းထိပ်က နှင်းဆီ ဆိုင်ကပြောတယ် ကောင်လေး နင်ပန်း မ၀ယ်တာ ကြာပြီနော် ……….
ရိုးတံတွေ ကြိုးကြဲနေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ခုရဲ့ အောက်က လမ်းဘေးပီစီအို ဆိုင်လေးကနေ နင့်ဆီကို ဖုန်းဆက်နေတုန်း နင်ဖုန်းချသွားတယ်။ တယ်လီဖုန်းလေးက ငါ့ကို ပြောတယ် တာ့တာတဲ့။
လမင်းကြီး ထိန်ထိန်သာတဲ့ နေ့ဟာ နင်နဲ့ငါ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ နေ့ပဲလေ၊ လမသာတဲ့ ညတွေမှာလည်း နင့်ကို သတိရဆဲပါ။ နင်ပြောခဲ့တဲ့ ရက်ကို အိပ်မက်တွေ မက်ရင်းနဲ့ စိုးထင့်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ စောင့်နေခဲ့ဘူးတယ်။ နင်ပြန်မ လာတော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ နွေလည်နေ့ခင်း တစ်ခုကို ငါအခုထိ မမေ့ဘူး။
အဲဒီနေ့က နင်ထားသွားခဲ့တဲ့ နေ့လေ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:10 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော် တံခါးချပ်တွေကို တွန်းဖယ်လိုက်တယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:41 PM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မကြာမှီ အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်တော့မည့် ဆရာကြီး တစ်ယောက်အတွက် အလုပ်ရှင်တစ်ဦး အလိုရှိသည်။
အောက်ပါ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည် (နိုင်ငံခြားသား ဆိုလျှင်ဘာဖြစ်သလဲ လို့ မမေးပါနှင့် ကျွန်ုမသိပါ။ သတင်းစားထဲမှာ ပါသည့်အတိုင်း လိုက်ရေးကြည့်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်)
ယင်းကုမ္ပဏီသည် ကြွေးမြီကင်းသော ကုပ္ပဏီဖြစ်ရမည် (World Bank ၏ ထောက်ခံချက်ကို ပူးတွဲ တင်ပြရန်)
လျှောက်လွာတွင် အမြင့်ဆုံးပေးနိုင်မည့်လာစာကို ရေးသွင်းရန် (အခြားသော ခံစားခွင့်များ ပေးရန် လုံးဝ လုံးဝ မလိုအပ်ပါ)
ဘာကြောင့် အလုပ်ခန့်လိုသည် ဆိုသည့် အကြောင်းအရင်းကို အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် အေဖိုး နှစ်မျက်နှာခန့် လိုရင်းတိုရှင်း ရေးသွင်းရန် (အလုပ်လျှောက်လျှင် ဘာကြောင့် အလုပ်လုပ်လိုသည်ကို ရေးသွင်းရသလို၊ အလုပ်ခန့်သည့် အခါတွင်လည်း ဘာကြောင့် ခန့်ထားလိုသည်ကို ရေးသွင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။)
ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံ ကုမ္ပဏီ မဖြစ်ရပါ။ (UN EU နှင့် US တို့မှ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲ တင်ပြရန်)
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက် ဖယ်ရီ အကြိုအပို့ ရှိပြီး ရုံးခန်းတွင် လေပူ လေအေး စနစ်ပါရှိရမည်။ (ရန်ကုန်မြို့သည် ဘတ်စကားများ ကြပ်ပြီး ပူတတ်အေး တတ်သော ရာသီဥတု ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်)
အလုပ်ရှင်သည် ၁၀ ရက်တရား တရားစခန်း အနည်းဆုံး ဆယ်ကြိမ်ထက် မနည်းဝင်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။(အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဒေါသ ကြီးတတ်သောကြေင့် ဖြစ်သည်။ မဟာစည်။ ဂိုအင်ဂါ ရှင်ဆေကိန္ဒ အစရှိသည့် တရားစခန်းများ ထံမှ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်ပြရန်)
လျှောက်လွှာတင်သွင်းလိုသူများသည် အမှတ် 101 ၅၁ လမ်းတွင် ကြော်ငြာပါသည့် နေ့မှ နှစ်ပတ်အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ လျှောက်လွှာ လာရောက် ၀ယ်ယူစဉ် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် မူရင်း အပါအ၀င် လိုအပ်သော စာရွက်စာရွက်စာတမ်း ထောက်ခံ ချက်များကို တပါတည်း ယူဆောင်လာ ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်တာ မကြိုက်သူများ ကွမ်းစားတာ မကြိုက်သူများ အလုပ်ချိန်တွင်း ဘီယာသောက်တာ မကြိုက်သော လုပ်ငန်းရှင်များ လုံးဝ လုံးဝ လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:45 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က ဘိုသီ ဘတ်သီ ၀တ်ပြီး မီးအိမ်တစ်လက်နဲ့ ရိုးသားတဲ့ လူကို လိုက်ရှာတာ။ အခုတွေ့နေတဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က ရက်ပါလိုဝတ် ဓာတ်မီးကြီး တစ်လက်နဲ့ လူယုတ်မာကို လိုက်ရှာတာ .................
အခန်းအတွင်း၌ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း စစ်တုယှဉ် ထိုးနေတုန်း အခန်းတံခါးက ပြုန်း….. ဆိုပွင့်သွားတယ်။ ကျွန်တော် တံခါးရှိရာကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့၊ ဘောင်းဘီပွပွ အင်္ကျီပွပွ တွေကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ရှာထိုးဦးထုပ်ကို နောက်ပြန် ဆောင်းထားတဲ့ လူတစ်ယောက် အခန်းထဲကို ၀င်လာတယ်။ သူ့ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ အနောက် တိုင်းသား အဖိုးကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း ကျွဲခလောက် လောက်ရှိတဲ့ ဆွဲသီးကြီးနဲ့ ခွေးချည်ကြိုးလောက် ရှိတဲ့ စတီးဆွဲကြိုးကြီးကို ဆွဲထားပြီး လက်ထဲမှာ ဓာတ်ခဲ ၁၂ တောင့်ထိုး လက်နှိပ်ဓာတ်မီး အကြီးအကြီး တစ်လက်ကို ကိုင်ထားတယ်။
“ဟေ့လူ ဘာဖြစ်လို့ ခွင့်မတောင်း ပဲဝင်လာရတလဲ”
“ဘာဖြစ်လို့ အခန်းတံခါးကို ပိတ်မထားတာလဲ၊ အခန်းတံခါးကို ပိတ်မထားခြင်းသည် ဆန္ဒရှိသလို ၀င်ထွက်လို့ရပါတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပယ် သက်ရောက်တယ်”
“မဆိုင်တာပဲဗျ၊ ခင်ဗျားမှာ ယဉ်ကျေးမှု မရှိဘူးလား”
“ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာကို ပြောတာလဲ။ လူရှေ့သူရှေ့မှာ အတွင်းစိတ်တွေကို ဖုံးကွယ်တဲ့ အလေ့အထကို ပြောတာ မဟုတ်လား။ ဘာလုပ် မှာလဲ ပျင်းစရာကြီး”
“ထားလိုက်ပါ ခင်ဗျား လာရင်းကိစ္စကိုပြော”
သူ့ဓာတ်မီးကြီး ထောင်ပြပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။
“ဆောရီးပဲ ကျွန်တော့်မှာ ဓာတ်ခဲ အားသွင်းတဲ့ စက်မရှိဘူး”
“မလိုဘူး ငါ့မှာ ပါလာတယ်”
လူစိမ်းသည် စကားပြောရင်း ဆိုရင်းဖြင့် သူ့၏ ဧရာမ ဘောင်းဘီ အိတ်အတွင်းမှ ဓာတ်ခဲ အားသွင်းစက်ကို ထုတ်၍ အားသွင်းဖို့ ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုးလိုက်ပါတော့သည်။
“ကောင်လေး ဒီမှာ ဓာတ်ခဲ အားသွင်းရင် ဘယ်လောက်လောက် ကြာမှာလဲ”
“မီးမပျက်ရင်တော့ ခြောက်နာရီလောက်ပေါ့ဗျာ၊ မီးပျက်ရင်တော့ ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး”
လူစိမ်းသည် ဓာတ်ခဲကို အားသွင်းတဲ့ စက်ကို ကြည့်လိုက်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ထိုးနေသော စစ်တုယှဉ် အရုပ်များကို လာကြည့်လိုက်နှင့် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေသည်။ သေချာတာတော့ ဒီလူ ပုံမှန် လူမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ကို နည်းနည်းလောက် စပ်စု ကြည့်လိုက်တယ်။
“ဟေ့၊ ခင်ဗျားက ဓာတ်မီးကြီး တစ်လက်နဲ့ ဘာလုပ်တာတုန်းဗျ”
“ကမ္ဘာပေါ်မှာ အယုတ်မာဆုံး လူတစ်ယောက်ကို မီးထွန်းပြီး လိုက်ရှာနေတာ”
“အန် ခင်ဗျားက အဆန်းပဲ၊ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်ကို အားကျလို့လား”
“အားကျတာမဟုတ်ဘူး ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်ဆိုတာ ငါပဲ”
ဟိုက်ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလိမ့်။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က ဘိုသီ ဘတ်သီ ၀တ်ပြီး မီးအိမ်တစ်လက်နဲ့ ရိုးသားတဲ့ လူကို လိုက်ရှာတာ။ အခုတွေ့နေတဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က ရက်ပါလိုဝတ် ဓာတ်မီးကြီး တစ်လက်နဲ့ လူယုတ်မာကို လိုက်ရှာတာ။
“ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က ရက်ပါလို မ၀တ်ပါဘူး”
ကျွန်တော် မ၀ံ့မရဲနဲ့ သူကို ပြောလိုက်တယ်
“ဟေ့ကောင် အလက်ဇန္ဒား လက်ထက်က အရူးတွေက ဘိုသီ ဘတ်သီဝတ်တယ်။ အခု ခေတ်အရူးတွေက ဘိုသီ ဘတ်သီ မ၀တ်ဘူး၊ အင်္ကျီပွပွ ဘောင်းဘီပွပွဝတ်ပြီး ဦးထုတ်ကို နောက်ပြန် ဆောင်းတယ်။ အဲဒါ ခေတ်သစ် အရူးတွေရဲ့ သင်္ကေတပဲကွ”
“ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား မီးအိမ်ကြီးကရော ဘယ်ရောက် သွားတာတုန်း”
“သီဘောမင်း ပါတော်မူတုန်းက၊ ကာနယ်စလေဒင်က လိုချင်တယ်ဆိုလို့ ခဏငှားလိုက်တာ တခါတည်းဆုံးရော”
“ကာနယ်စလေးဒင်က ဘာဖြစ်လို့ ခင်ဗျား မီးအိမ်ကို ငှားရတာလဲ”
“သီဘောနဲ့ စုဘုရားလဒ်ကို ဂေါဝိန်ဆိပ်က သင်္ဘောပေါ် အတက်မှာ ပြစရာ မီးအိမ် မရှိလို့တဲ့လေ။ အရှင်နှစ်ပါး ပါတော်မှုခန်း ပန်းချီကား မမြင်ဖူးဘူးလား၊ အဲဒီအထဲက မီးအိမ်က ငါ့မီးအိမ်ပေါ့ကွ”
“ဒါများဖြင့်ဗျာ အသစ်တစ်ခု ထပ်ဝယ်ပေါ့”
“ဟေ့ကောင် မင်းမသိဘူးလား၊ ကမ္ဘာရေနံစိမ်း ပေါက်ဈေးက တစ်စည်ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာကျော်နေပြီ၊ ဓာတ်ခဲက အားပြန်သွင်းရင် ရတယ်။ ငါက မီးအိမ်ကိုင်တဲ့ လူပဲ ကိုင်ချင်တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက် အောင်နေ တတ်ရတယ်”
“ဟုတ်ပါပြီ။ အယုတ်မာ ဆုံးလူကို လိုက်ရှာတာနဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်နဲ့က ဘာဆိုင်လို့တုန်း”
“မင့်အိမ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတိုင်းပြည်မှာ လူယုတ်မာတွေ ပေါတယ်ကြားထားလို့ လာရှာတာ”
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် စကားပြောနေတုန်း အပြင်က လူတစ်ယောက်က ၀င်ခွင့်တောင်းတဲ့ အသံကို ကြားရတယ်။ ကျွန်တော်က ၀င်လာဖို့ ပြောဖို့ ကြံတုန်းရှိသေးတယ်
“ဟေ့ကောင် သောက်ပေါ၊ ရူးချင်ယောာင် ဆောင်မနေနဲ့၊ နိုင်ငံတစ်ခုကို ခွင့်ပြုချက် မရပဲ ၀င်တိုက်တဲ့လူက အိမ်တစ်လုံးအရှေ့မှာ ၀င်ခွင့် တောင်းတယ်ဆိုတာ ပုံစံမကျဘူး။ ၀င်လာခဲ့”
ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောချလိုက်တယ်။
အဲလို ၀င်ခွင့်လဲ ပြုလိုက်ရော အရပ်ရှည်ရှည် နဖူးကြော တွန့်တွန့် နာခေါင်းချွန်ချွန်နဲ့ လူတစ်ယောက် ကုတ်ချောင်း ကုတ်ချောင်းနဲ့ ၀င်လာတယ်။
ဂျော့ဘုက သူ့ကို သူမိတ်ဆက်တယ်
“စကား သိပ်များနဲ့ လိုရင်းပြော”
“ဒီလိုပါ၊ ကျွန်တော် တိုင်ပင်စရာလေး တွေရှိလို့ပါ”
“အေး အဲဒါဆိုလာကွာ စစ်တုယှဉ် တစ်ပွဲလောက် ထိုးရအောင်”
“အာ မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော် အချိန် မရတော့လို့ပါ”
“ဗျာ လုပ်မနေ့ မင်းပဲ အချိန်မရဘူးဆို။ ဘာလို့ လာနေတာလဲ ပြန်တော့”
ဂျော့ဘုတ်တစ်ယောက် မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ခေါင်းလေးကုတ်ပြီး လှည့်ပြန်သွား ရှာတယ်။ ကျွန်တော် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဂျော့ဘုဘ်ကို ကြည့်ပြီး သနားနေမိတယ်။
“အဲဒါပဲကွ၊ လူတွေက သူတို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ သူများ အချိန်ကို လာဖြုန်းချင်ကြတယ်။ အဲလိုလူတွေက သူများအတွက် သူ့အချိန်လေးကို နဲနဲလောက် သုံးပေးပါဆိုရင် တစ်ခါတည်း ထွက်ပြေးတော့တာပဲ”
အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်တို့ စစ်တုယှဉ် တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ ဆက်ထိုးနေကြတယ်။ တစ်နာရီ လောက်လဲကြာရော ……….
“တဆိတ်လောက်ရှင် ကျွန်တော်မကို ၀င်ခွင့်ပြုပါ”
ကျွန်တော့် ကြည့်လိုက်တော့ ဖွင့်ထားတဲ့ တခါးအပေါက်ဝမှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရပ်နေတယ်။
“အဲဒါပဲကွ၊ လူတွေက ကွယ်ရာမှာ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကိုတောင် ဖွင့်ကြည့် တတ်ကြပေမယ့်၊ လူအရှေ့ သူအရှေ့လဲ ရောက်ရော ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးအရှေ့မှာ ရပ်ပြီး ၀င်ခွင့်တောင်းတတ်ကြတယ်”
ဒိုင်အောဂျီးနစ်က ကျွန်တော့ကို ပြောသည့်ဟန်ဖြင့် အပေါက်ဝက အမျိုးသမီးကို တမင်တကာ မကြားတကြား ပြောလိုက်တယ်။ အဲလို ပြောလိုက်တာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လဲ အသိတရား အသစ်တစ်ခုရသွားတယ်
“လူတွေက ပြောစရာရှိတဲ့စကားကို တိုက်ရိုက်မပြောကြပဲ မကြားတကြားပုံစံမျိုးနဲ့ တစ်ဘက်လူကို သိအောင် ပြောတတ်ကြတယ်။”
အမျိုးသမီး အိမ်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ သူ့ပုံကိုကြည့်ရတာ မျက်နှာက စုတ်ချွန်းချွန်း နှာခေါင်းက ချွန်ချွန် နုတ်ခမ်းထော်ထော်နဲ့ မီးယပ်ပိန်ပိန်နေတဲ့ ကပ်ပလီ မတစ်ယောက်ပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် မြင်ဖူးပါတယ်လို့ ကြည့်နေတာ သူက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက် ကိုး။
“ဟုတ်.. ဟုတ်.. အကူညီ လေးတစ်ခုလောက် တောင်းချင်လို့”
ရိုက်က မ၀ံ့မရဲနဲ့ ပြောတယ်
“အေးရတယ်။ လောလောဆယ်ကွာ ငါ့ကို အရင်ကူညီပါဘူး။ စစ်တုယဉ် ထိုးနေလို့ မကုတ်အား ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့ကြောက ပွေးတွေကို တချက်လောက် ကုတ်ပေးပါ”
ပြောပြော ဆိုဆို ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်က သူ့အင်္ကျီကို လှန်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် တောင်ကြည့်ပြီး ကြက်သိန်း ထသွားတယ်။ နည်းတဲ့ ပွေးကွက်ကြီး မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွေကလဲ ရွဲလို့။
ကွန်ဒိုလီဇာကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ ရွံ့နေပုံပဲ နှာခေါင်းရှုံ့နေတယ်။ သူ ပွေးကွက်ကြီးကို သေချာကြည့်နေတယ်။ နောက်တော့သူ နောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ်နဲ့ ပြန်သွားလေရဲ့။
“အဲဒါပဲကွ။ လူတွေက သူတို့ အကူညီလိုရင်တာ တောင်းတတ်ကြတာ။ သူတို့ကို ပြန်ကူညီ ခိုင်းရင် ရှုံးလား မြတ်လား ချိန်တတ်ကြတယ်။
စောစောက သူအကူညီ တောင်းမဲ့ ကိစ္စက ပွေးကုတ်တာလောက် အရေးမကြီးလို့ပေ့ါကွာ။ တကယ်လို့သာ အဲဒီထက် ပိုပြီး အရေးကြီးရင် ပွေးထက်ဆိုးတဲ့ နေရာကို ကုတ်ခိုင်းရင်တောင် ငြင်းမှာ မဟုတ်ဘူး”
အဲဒီနောက် ကျွန်တော်နဲ့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ် စစ်တုယှဉ်ကို ဆက်ကစားတယ်။ ကျွန်တော်က စစ်တုယှဉ် ကစားရာမှာ မြင်းနဲ့ ဘုရင်မကို အားသန်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒိုင်အော်ဂျီနစ်က ပွန်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထိုးစစ်ဆင်တယ်။ ကျွန်တော် မြင်းတွေ ဘုရင်မတွေက သူ့ပွန်းတပ် အရှေ့မှာ ထိုးစစ် မဆင်မဆင်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။
“တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာလဲ စစ်တုယဉ်ကစား သလိုပဲကွ၊ မင်းလဲ မင်းသန်တဲ့ ဘုရင်မတို့ မြင်းတို့နဲ့ ထိုးစစ်ဆင်သလို ငါလဲ ငါသန်တဲ့ ပွန်း(နယ်ရုပ်) တွေနဲ့ ထိုးစစ် ဆင်တယ်။
ဘ၀ တိုက်ပွဲကို တိုက်ရင်လည်း အဲလိုပဲ ကိုယ်အားသန်တဲ့ နယ်ပယ်ကနေ တိုက်ရတယ်။”
ကစားရင်း ကစားရင်းနဲ့ ကျွန်တော် မြင်းက ရှေ့တန်းကို ရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က အဖြူကိုင် သူက အမည်းကိုင်။ ကျွန်တော် ရဲ့ ဘယ်ဘက်မြင်းက သူရဲ့ ညာဘက် ဘိရှော့အရှေ့က ပွန်းကို စားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ အရှေ့တိုင်းသား တစ်ယောက် ၀င်လာတယ်။
၀င်လာတဲ့ အရှေ့တိုင်းသားက ကျွန်တော်တို့ ကစားနေတဲ့ စစ်တုယှဉ်ကစားကို ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့
“အနက်ဘက်က ဘုရင်မကို မြင်းဘေးနားလေး ကပ်လိုက်” ကျွန်တော်တို့ ကစားဝိုင်းကို ၀င်ပြောတယ်။
“အဲလို ကပ်လိုက်ရင် ခွချက်မိပြီး ဘုရင်မ ကျသွားမှာပေါ့ကွ”
လူစိမ်းက အားနာသွားဟန်နဲ့ ပြောတယ်။
“အဲဒါပဲကွ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ ၀င်ဝင်ပြီး ဆရာလုပ်တတ်ကြတယ်”
“ကျွန်တော် စကားပြောလို့ ရမလား”
“ကျွန်တော့် နာမည် ဘန်ကီးမွန်းပါ၊ လက်ရှိ ကုလသမ္မဂမှာ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ရာထူးကို ယူထားပါတယ်”
“ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်ကို ကုလသမ္မဂမှာ အထူးအကြံပေး အရာရှိ အနေနဲ့ လာလျှောက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ”
“အဲဒီမှာ လုပ်တော့ ဘာရမှာလဲကွ မလုပ်ချင်ပါဘူး”
“အဲဒါ ခက်တာပဲ လူတွေက ချမ်းသာခြင်း လာပေးတာကို မယူတတ်ကြဘူး။ အခွင့် အရေးဆိုတာ နှစ်ခါ ပြန်မရဘူးနော် စဉ်းစားပါဦး”
ဘန်ကီးမွန်းက ဆရာကြီး လေသံနဲ့ ပြောတယ်။
“ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ”
“ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ လာလုပ်ရင် အခုလို ဓာတ်မီး တစ်လက်နဲ့ အရူးကြီးလို လျှောက်သွားနေ တာထက်တော့ ချမ်းသာမှာပါ”
“ကောင်းပြီး မင်းထမင်းကို ဘယ်အချိန် စားလဲ”
“ရုံးထမင်းစား ဆင်းချိန် နေ့လည် ဆယ့်တစ်နာရီပေါ့”
“ညအိပ်တော့ရော ဘယ်အချိန် အိပ်လဲ”
“အလုပ်တွေ ပြီးတဲ့ အချိန်ပေါ့။ တခါတစ်လေ မနက်စောစော အစည်းဝေးရှိရင်တော့ စောစော အိပ်ရာဝင်တယ်”
“ပုံမှန်နေ့တွေ ဆိုရင်တော့ ခြောက်နာရီ လောက်ထတယ်။ လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လုပ်ရမှာနဲ့ ရုံးသွားရမှာနဲ့ ဆိုတော့ အဲဒီ အချိန်လောက် ထတာ အတော်ပဲ။ အစည်းဝေးရှိရင်တော့ စောစော ထပါတယ်”
“မင်း မသိသေးရင် ပြောပြမယ်။ မင်းက အဖွဲ့အစည်းအလိုကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ထမင်းစားတယ်။ ငါက ဗိုက်ဆာတဲ့ အချိန်မှာ စားတယ်။ မင်းက အဖွဲ့အစည်းအလိုကျ အိပ်ရာ ၀င်တယ်။ ငါ့ရဲ့ အိပ်ချိန်က ငါအိပ်ချင်တဲ့ အချိန်ပဲ။ မင်းက အဖွဲ့ အစည်းအလိုကျ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ရာ ထရတယ်။ ငါအိပ်ရာ ထတဲ့ အချိန်က ငါအိပ်ရေးဝတဲ့ အချိန်ပဲ”
ဒိုင်အော်ဂျီးနစ် စကားဆုံးတော့ ဘန်ကီးမွန်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လှည့်ထွက်သွားတယ်။
“အဲဒါပဲကွ လူတွေက တော်တော့ တော်ကြတယ် ရည်ရွယ်ချက် မကောင်းကြဘူး”
“ ဥမာ ရေနစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကယ်မယ်ဆိုပါစို့။ အဲလို လူမျိုးတွေ ရေထဲဆင်းပြီး လူကို လိုက်ဆယ် နေတယ်ဆိုတာဟာ လူကို ကယ်ချင်တဲ့ စေတနာထက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရေးကူး ကျွမ်းကျင်ကြောင်း ပြချင်တာက များနေတယ်”
ထို့နောက် ကျွန်တော်နှင့် သူဆက်ပြီး စစ်တုယှဉ်ထိုးကြသည်။ ထိုးရင်း ထိုးရင်းဖြင့် ကျွန်တော် ဗိုက်ဆာလာသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုခု စားဦးမည်ဟု ဆိုကာ မီးဖိုးခန်းအတွင်းသို့ ၀င်လာခဲ့သည်။ မီးဖို ခန်းထဲတွင် ကျွန်တော် ထမင်းနှင့် ဟင်းများကို ဇလုံးအတွင်းသို့ ထည့်ကာ ဇွန်းတစ်ချောင်း တပ်ပြီး အိမ်ရှေ့ခန်းသို့ ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ အိပ်ရှေ့ရောက်တော့ ဒိုင်အော်ဂျီးနစ်ကို မတွေ့တော့ပါ။ ကျွန်တော် အသံပြု ခေါ်ကြည့်ပေမယ့် ပြန်ထူးတဲ့ အသံကို မကြားရဘူး။
ပလပ်ပေါက်ထားသည့် နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ ဓာတ်ခဲ အားသွင်းတဲ့ စက်တွေ မရှိတော့ဘူး။ တံခါးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဟောင်းလောင်း ပွင့်နေသည်။ သေချာတာကတော့ သူပြန်သွားပြီ။ ကျွန်တော် ပွင့်နေသော တံခါးကို သွားစေ့ပြီး စစ်တုယှဉ် ခုံရှိရာဆီသို့ လာခဲ့သည်။
စစ်တုယှဉ် ခုံကို ရောက်တော့ ………………..
ဘုရင်ကြီး ရဲ့ အောက်မှာ စာရွက်လေး တစ်ရွက်ကို ခေါက်ထား တာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ စာခေါက်လေးကို ယူပြီးဖွင့်ကြည့် လိုက်တယ်။
အထက် အရာရှိတို့ အလုပ်ရှင်တို့ဆိုတာ မီးလိုပဲ။ သူတို့နဲ့ နီးနီးနေလို့လဲ မရဘူး။ ဝေးဝေး နေလို့လဲ မရဘူး။
နီးလွန်းရင် ပူတယ်။ ဝေးလွန်းရင် အနွေးဓာတ်မရတော့ဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:57 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ